Amaphuzu avelele ayi-10 eTour de France - ULLER
Julayi 21, i-2021
Uma ungumthandi wezemidlalo futhi uhamba ngebhayisikili ngokukhethekile, uzokwazi vele ukuthi iTour de France ingenye yemicimbi ebaluleke kakhulu futhi emele lesi siyalo, futhi futhi ingenye yezinzima kakhulu futhi izuzisa kakhulu kubahlanganyeli bayo. Minyaka yonke amakhulukhulu abagibeli bamabhayisikili ahamba ibanga elingaphezulu kwama-3000km ngezigaba ezingama-21 lapho izithukuthuku, amandla nokuzinikela kungabadlali abathathu abaphambili. Kusukela ngo-1903 kwethulwa iTour, nangemva kokushicilelwa okungaphezu kwekhulu, sekuqoqwe ama-anecdotes nemicimbi eqophe umlando emhlabeni wokuhamba ngebhayisikili nokuthi uzofuna ukwazi. Ngakho-ke, uma uthanda ukuprakthiza kanye / noma ukulandela lesi siyalo, lawa maqiniso ayi-100 afuna ukwazi ngeTour de France ayakuthakazelisa!
1. Isikhathi okwazalwa ngaso iTour de France.
ITour de France yabanjwa okokuqala ngo-1903 futhi yaqala ngezigaba eziyisithupha ezicishe zibe ngu-6km inye.
Kwakungamaphephandaba aseFrance L'Auto y Mboze labo abathathe isinqumo sokuthola iTour de France lapho bebona udumo lwalesi siyalo. Ngokuqondile, kwakunguFrance uHenri Desrange, umqondisi wenhlangano yezemidlalo uL´Auto, owanquma ukukhuthaza lolu hlelo lokufeza ukusebenza kwezomnotho okukhulu ephephandabeni lakhe. Njalo lapho amakhasi alezi zindaba efaka imininingwane ngebhayisikili, ukuthengisa kwawo kukhuphuka kakhulu. Empeleni, ngemuva kohlelo lokuqala lweTour futhi selibhale phansi zonke izigaba nokuhamba kwabahlanganyeli balo nsuku zonke, wonke amaphephandaba anyamalala ezitolo zezindaba zaseParis esikhathini samahora ambalwa. Abantu babenentshisekelo yokwazi okwengeziwe ngesiyalo, ngaphandle kokuvumela ukufuduka ngokushesha futhi okulula, nakho okwadala ukugwenywa kwempi nezinkinga zenhlalo yangaleso sikhathi.
Eminyakeni edlule nempumelelo etholwe yiTour de France, umphakathi ulandele uhlelo ngalunye lwalo mncintiswano phansi kwenganono, uqinisekisa lokho izintatheli zaseFrance ebekulindele ekuqaleni kwazo: izethameli kwabezindaba Zezokuxhumana kanye nokuthengisa ku amaphephandaba abhaliwe anda njalo uma kukhulunywa ngebhayisikili.
2. Ngenkathi iTour yokuqala ithwesa umpetha wayo wokuqala.
Umnqobi wokuqala osemthethweni walo mncintiswano obalulekile owabanjwa ngo-1903 kwakungumgibeli wamabhayisikili uMaurice Garin, owanqoba iTour de France ngemuva kwezinsuku eziyi-19 nezigaba eziyisithupha ezicishe zibe ngu-6km ngamunye. Ngaleso sikhathi, abagibeli bamabhayisikili kwakudingeka bagibele ibhayisikili elifanayo kulo lonke umncintiswano, futhi uma lalimala, kwakudingeka bazilungise ngokwabo ngaphandle kokukushintsha. Ngaphezu kwalokho, uGarin kwadingeka agijime iTour ebusuku, okuyiqiniso elaqedwa eminyakeni emibili kamuva ngenxa yokuntuleka kokuphepha okwakuhambisana nakho. Ngaphandle kwalokhu kunqoba okungumlando, uMaurice Garin, owazalelwa e-Italy futhi wakhulela eLens, eFrance, waphinde wabamba iqhaza ngonyaka olandelayo futhi wavunyelwa ukwenza ingxenye yeTour ngemoto. Umgibeli wamabhayisikili uqambe igama lakhe kwi-velodrome esesekhona edolobheni laseLens, waphinde wayinikeza nomunye wemigwaqo edume kakhulu eMaubeuge, eFrance.
3. Lapho kutholakala umgibeli webhayisikili wokuqala wokudakwa kwezidakamizwa.
UVicente Blanco wayengumgibeli wamabhayisikili ophumelelayo waseSpain owabamba iqhaza emiqhudelwaneni eminingi kulokhu kuqeqeshwa selokhu baqala ukubanjwa, kufaka phakathi iTour de France. Ngaphambi nje kokubamba iqhaza kwakhe kulo mncintiswano, uBlanco walahlekelwa izinzwane eziningana, iqiniso elamnika igama lesidlaliso elithi "El lame", kepha yize ayenezinkinga zomzimba, waqhubeka nokuncintisana ngokomsebenzi. Kwakungalesi sikhathi esiqondile lapho abaseSpain baqala umsebenzi wakhe wokusebenzisa izidakamizwa noma izidakamizwa.
Ngo-1910 wabamba iqhaza kwiTour de France yize ayebhekene nezinkinga ezinkulu zempilo, futhi uma izimo ezinzima zazivele zibahlasele bonke ababambiqhaza, bakwenza lokho ngokuqina okukhulu kulabo ababephethwe noma yisiphi isifo esinjengaye. Ngale ndlela, uVicente Blanco wavumelana nabanye abagibeli bamabhayisikili ababehlangana naye ukuhlangana ezindaweni ezinamasu esigabeni ngasinye seTour ukumnikeza ukudla ukuze athole inzuzo futhi ngaleyo ndlela aqhubeke nomncintiswano ngaphandle kokuphazamiseka. Ngale ndlela, umgibeli wamabhayisikili waseBasque waba ngomunye wabokuqala ukusebenzisa i-doping ekuqeqesheni ukuhamba ngebhayisikili ngobungcweti ngokudla.
4. Ngesikhathi iTour de France isakazwa okokuqala.
Kwakungo-1930 lapho lo mncintiswano odumile wamabhayisikili waqala ukusakazwa emsakazweni, kodwa kwaze kwaba ngo-1952 lapho okuqukethwe okuvela eTour kwaqala ukufakwa kuthelevishini. Lo mncintiswano ubulokhu unenqwaba yabalandeli nabalandeli abasekele abagibeli bamabhayisikili abathandayo emakhaya abo, njengoba beqale njengendlela yokuphunyuka enkulu yabantu baseYurophu phakathi nempi kanye nezingxabano zenhlalo yangaleso sikhathi. Njengoba iminyaka isihambile kanti iTour isibe ngomunye wemicimbi efanelekile kule nkambo, isakazwa bukhoma kuzo zonke izigaba nezigaba zayo.
5. Isikhathi okwabonakala ngaso iJersey Ephuzi
Ngemuva kwezinhlelo zokuqala eziphumelele zeTour de France, iMpi Yezwe I yafika eYurophu ngo-1914, ngaleyo ndlela iphazamisa isigqi semvelo sempilo nemidlalo yazo zonke izakhamuzi zaleli zwekazi. Ngemuva kwezingxabano eziningi zempi kanye noguquko oluphelele noluphelele emiphakathini yezenhlalo nezepolitiki okwamanje, iTour de France yabuya eminyakeni emine kamuva, ngo-1918, ifaka into eseyintsha manje: ijezi eliphuzi. Inhloso yalesi sici ukuhlukanisa umholi wokwehlukaniswa kwabanye abagijimi emncintiswaneni futhi umbala wawo ophuzi ubhekisa endimeni yephephandaba laseFrance L´Auto, Umqondisi wakhe wayengumsunguli omkhulu weTour. Namuhla le ngubo igcinwa inenhloso efanayo nasekuqaleni kwayo.
6. Isikhathi lapho uLance Armstrong ehlulwa khona konke ukunqoba kwakhe.
Umgibeli wamabhayisikili waseMelika u-Armstrong nguyena owaphumelela phambili kwiTour de France, ethole ukunqoba okuyisikhombisa okulandelanayo kusuka ngo-1999 kuya ku-2005. Owabonakala eyingqophamlando yokuhamba ngebhayisikili wasolwa kaningi ngokuba nemikhuba yokusebenzisa izidakamizwa kuTour ngemuva kokudla izinto njenge-steroids, i-cortisone, i-testosterone ... U-Armstrong, owahlushwa umdlavuza wamasende ngo-1996, wavuma ukuthi wazidla lezi zinhlobo zezinto ngemuva kokuhlinzwa ukuze anqobe lesi sifo.
Odokotela baseFrance, abanye abagibeli bamabhayisikili kanye nabezindaba ngokufanayo baqala impi enkulu yokushushisa eyagcina iphethe ngokuhoxa ukunqoba kweMelika iTour de France okuyisikhombisa, kanye nokuvinjelwa impilo yonke ekugibeleni amabhayisikili abangochwepheshe.
7. Lapho uhambo olude kakhulu emlandweni lwenzeka.
Ngo-1926, iTour de France yayinezigaba eziyi-17 cishe ezingama-330km ngosuku, okwenza kube ngaphezu kuka-5000km, irekhodi elingakaze lidluliswe kuze kube manje. Njengamanje iTour de France inezigaba eziningi, kodwa amakhilomitha ambalwa, angeqi ku-3500km kunoma yiluphi uhlobo lwayo. Ngo-1926 abagibeli bamabhayisikili abayi-126 babamba iqhaza, okwaba ngu-41 kuphela abafinyelela entanjeni. Ophumelele kwaba umgibeli wamabhayisikili waseBelgium uLucien Buysse, okwazile ukuqedela zonke izigaba ngejubane elijwayelekile elingu-24km / h.
8. Lapho umgibeli wamabhayisikili waseBrithani uTom Simpson elahlekelwa yimpilo yakhe eTour de France.
UTom Simpson wayengumgijimi omkhulu owayekhethekile kwezomgwaqo nomkhondo owathi ngo-1967 walahlekelwa yimpilo yakhe eTour de France ngenxa yokungeniswa kwama-amphetamines notshwala, amazinga okushisa aphakeme abekwa kuwo ukuncintisana nokwehluleka kwenhliziyo. Naphezu kwempilo yakhe ebuthaka njengoba iBriton kanye nokuwa okuningana kulo lonke iTour, uSimpson waphikelela egijima kwaze kwaphela amakhilomitha ambalwa ukusuka ekugcineni waquleka futhi wafa.
9. Ngesikhathi uChris Froome egijima umlenze walolu hambo ngo-2016.
Sikhuluma ngoChristopher Froome, umgibeli wamabhayisikili waseBrithani owazalelwa eKenya othathwa njengomunye wabanamandla kunabo bonke emhlabeni emijahweni yasesiteji, owine izigaba ezi-2 eGiro d'Italia, ezinhlanu eVuelta a España nezingu-5 eTour de France, phakathi kokunye ukunqoba okuningi.
Kwakungu-2016, engumholi weTour de France ngaleso sikhathi, lapho uChris Froome elahlekelwa ibhayisikili lakhe ngenxa yokuphahlazeka okwabangelwa isithuthuthu senhlangano kanye nezimbangi zakhe ezimbalwa futhi waphoqeleka ukuba anyuse iMont Ventoux, engu-500 nje kuphela amamitha ukusuka entanjeni. Lokhu kucishe kwasho ukulahleka kwejezi eliphuzi kodwa wagcina ekwazile ukuphuma kulesi simo esingajwayelekile.
10. Ngenkathi iTour de France icekelwa phansi, kubhoboza amasondo ebhayisikili.
Uhlelo luka-1905 luqhakambise ukucekelwa phansi kwabathandi beTour ababeke ngobuciko izipikili eziyi-125kg emigwaqeni yezigaba ezahlukahlukene abazodlula kuzo abagibeli bamabhayisikili iTour de France, bakhubaza amabhayisikili abo ngemuva kokuhlatshwa ngamapayipi emasondweni abo futhi bengasizakalanga, ngoba ngaleso sikhathi ukusetshenziswa kwebhayisikili elilodwa kuphela kwakuvunyelwe kulo lonke loluhambo. Isibopho sabantu abenze lo mcimbi besingaziwa, kepha isizathu bekungukuthi: ushintsho emithethweni yomncintiswano, ngaleyo ndlela kususwe izingxenye zasebusuku zeTour ukugwema ukukopela kuzilawuli nezingcuphe zabahlanganyeli, abasakaza ngokungabonakali nakancane .
Akungabazeki ukuthi iTour de France ngomunye wemicimbi yezinkanyezi yabalandeli nabalandeli bamabhayisikili, kodwa ubusazi yini lezi zintshisekelo eziyishumi ngalo mncintiswano obalulekile?
IMIBUZO EVAME UKUBUZWA NGOKUVAKASHA KWEFRANSI
I-Tour de France inezigaba ezingaki?
Lo mncintiswano unezigaba ezingama-21 nebanga eliphelele elingamakhilomitha angaba ngu-3000 XNUMX.
Igcina kuphi iTour de France?
Kusukela yashicilelwa okokuqala ngo-1903, iTour iphela ngezifanekiselo zeChamps Elysées edolobheni laseParis. Akukaze kube khona uhlelo lapho lokhu bekungenzeki khona.
Yiziphi izigaba zomzila weTour de France?
ITour de France inemizila ehlukahlukene eyenzeka emncintiswaneni. Lokhu yikho: ukuhlukaniswa okuyisicaba, intaba emaphakathi kanye nesivivinyo sesikhathi ngasinye. Ngaphakathi kwentaba, kunamazinga amathathu ahlukene, i-HC iyisigaba esiphakeme kakhulu.
Kunzima ukuthola umuntu ongakaze ezwe ngeTour de France kodwa ... Ngabe ucabanga ukuthi wazi konke ngokuphelele ngalo mcimbi odumile wezemidlalo? Funda futhi uthole izinto eziyi-10